#Warbaahinta Israa’il oo Weerar Culus ku qaaday Ilhan Cumar | Get Latest News From Horn of Africa |
#Warbaahinta Israa’il oo Weerar Culus ku qaaday Ilhan Cumar
Tan iyo markii ay billaabatay doodda la xiriirta hadalladii lagu tilmaamay “Yahuud Naceybka” ee Ilhaan Cumar ay ku qortay boggeeda Twitter-ka, ayaa warbaahinta Israa’iil waxay si weyn uga hadlayaan gabadhan Soomaalida ah ee taariikhda gashay kaddib markii ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Muslim ah ee xubin ka noqotaa Aqalka Kongres-ka Mareykanka.
Faalladu waxay intaasi ku dartay in kooxaha taageersan Israa’iil sida AIPAC, ay ka faa’ideystaan fursadahaasi, ee aanay iyagu marnaba mas’uul ka ahayn taageerada uu Maraykanka u hayo Israa’iil.
Wargeyska Jerusalem Post ayaa waxaa uu ka hadlay arrin kale oo aanan meeshaba oollin, balse uu doonayo in akhristayaashiisa uu ugu sheego siday Ilhaan u necebtahay Yahuudda.
Waxaa uu qorey faallo uu cinwaan uga dhigay “Ilhaan Cumar miyay qorsheysay inay ka garab hadasho ninka naceb yahuudda ee Cabdalla”.
Wargeyska ayaa sheegay in dadka qabanqaabinayay xaflad lacag loogu ururinaayo hay’ad Islaami ah inay khalkhaleen, oo ay barnaamijka wax ka baddeleen ka dib markii ay soo baxday dhaleeceyn loo jeediyay Ilhaan oo ku saabsan in ay ka garab hadli rabtay nin lagu magacaabo Yusuf Cabdalla, oo wargeysku uu sheegay inuu aad u neceb yahay Yahuudda. Balse wargeyska waxaa uu intaasi ku daray in markiiba la baddelay barnaamijka xafladdaasi, oo liiska dadka hadlaya laga saaray Yusuf Cabdalla.
Wargeysyada Israa’iil intooda badan waxay si weyn u falanqeeyeen hadalkii Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee uu ku dalbananay inay is casisho Ilhaan Cumar, isagoo sheegay in raalligelinteeda la xiriirta hadalka ” Yahuud Naceybka ah” uu yahay mid daciif ah.
Wargeysyka Yedeot Ehernot ayaa si weyn uga hadlay arrintaasi waxa uuna sheegay in xildhibaannada laba xisbi ee Maraykanka ay cambaareeyeen falka Ilhaan.
Sidoo kale Wargeyska The Time of Israel ayaa aad uga sheekeeyay hadalladii ka soo yeeray Ilhaan Cumar ee lagu tilmaamay inay “Yahuud Nacaybka” ku salaysan yihiin.
Waxaa uu ka sheekeeyay sida ay xildhibaannada Yahuudda ee Maraykanka ay uga soo horjeesteen Ilhaan Cumar.
Taageerayaasha Israa’iil ayaa olole ka dhan ah Ilhaan Cumar billaabay kaddib markii ay sheegtay in ururka AIPAC ee taageera Israa’iil ay lacag siiyaan xildhibaannada Maraykanka.
Waxay ka jawaabeysay su’aal Twitter lagu soo qoray oo ahayd cidda maalgelisa siyaasiyiinta taageera Isra’iil.